10 रक्सी पेय विश्वव्यापी प्रयास गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 रक्सी पेय विश्वव्यापी प्रयास गर्न
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा चीन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा पोर्तुगल, ट्रेन यात्रा स्पेन, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
(Last Updated On: 13/08/2021)
गोप्य व्यञ्जनहरु, मन उडाउने स्वाद, र अत्यधिक रक्सी, संसारको सबै भन्दा राम्रो सलाखहरु र क्लबहरु यी सेवा गर्छन् 10 रक्सी पेय को प्रयास गर्नुपर्छ. चीन बाट युरोप सम्म, केही को 10 अल्कोहल पेय विश्वव्यापी प्रयास गर्न को लागी केहि सय बर्ष पुरानो हो. तैपनि, उनीहरु धेरै लोकप्रिय छन्, र एक पेय समातेर वा 2, तपाइँको छुट्टी मा एक अनुभव छ याद गर्न को लागी छैन.
1. रक्सी पेय विश्वव्यापी प्रयास गर्न: Aperol Spritz इटाली
वाइन आधारित ककटेल, Aperol Spritz स्वादिष्ट छ र यसको अवयव मुख्य पाठ्यक्रम आउनु भन्दा पहिले मात्र सही मात्रामा टिप्सी बनाउनेछ. Spritz एक क्लासिक लोकप्रिय aperitif छ उत्तरी इटाली मा, पहिलो भेनिस मा उत्पन्न भयो. Spritz Campari को एक मिश्रण हो, प्रोसेको, र सोडा पानी, बरफ मा, त्यसैले यो मा ताजा गर्न को लागी आदर्श छ तपाइँको शहर छुट्टी बिदा.
तपाइँ प्राय सम्भवतः उच्च वाइन गिलासमा सुन्तला-रातो र colored्गको पेय देख्नुहुनेछ, इटाली मा लगभग हरेक रेस्टुरेन्ट टेबल मा. Aperol spritz ताजा र भूमध्य तातो गर्मी को दिन को लागी एकदम सही छ, तेसैले तपाइँ मात्र यो मादक पेय को प्रयास गर्नु पर्छ जब इटाली मा भोजन.
एक ट्रेन संग भेनिस गर्न मिलान
बोलोग्ना एक ट्रेन संग भेनिस
ट्रेभिसो भेनिसमा एउटा ट्रेनको साथ
2. Absinthe फ्रान्स
प्रतिबन्धित भएपछि 100 फ्रान्स मा वर्षहरु, हरियो परी लोकप्रियता फिर्ता प्राप्त छ. यो हरियो मादक पेय पेरिस लेखक र कलाकारहरु को बीच एक मनपर्ने थियो 19-20th सताब्दी, अधिकतर Montmartre मा. Absinthe को एक हो 10 सबैभन्दा बलियो रक्सी पेय विश्वव्यापी प्रयास गर्न.
आज, तपाइँ absinthe को एक शट हुन सक्छ, तर केवल एक शट पछि यो पेय धेरै बलियो छ, पेरिस मा धेरै बारहरुमा. ला फी Verte, लुलु सेतो, L'Absinthe क्याफे, सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु जहाँ तपाइँ संसार मा सबैभन्दा बलियो मादक पेय को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ को केहि हो. तथापि, आधारभूत सामाग्री तपाइँ absinthe को हरेक रूप मा स्वाद हुनेछ anise छन्, वर्मवुड फूल, र मीठो सौंफ.
3. सांग्रिया स्पेन
तपाइँलाई सायद थाहा थिएन कि "Sangria" शब्द "Sangre" बाट उत्पन्न भएको हो, रगत, स्पनिश मा. यस मादक पेय को सामाग्री को बारे मा चिन्ता गर्न को लागी केहि छैन, यो विशेष नाम मात्र बलियो रातो रंग को संकेत गर्दछ. Paella को एक पकवान संग दिउँसो Sangria को एक कप भन्दा राम्रो केहि छैन.
मध्य युगमा अंगूर बाट Sangria सिर्जना गर्ने पहिलो रोमी थिए. ब्याक्टेरिया टाढा राख्न को लागी रक्सी को एक बिट पछि अंगूर पेय एक प्रसिद्ध मादक पेय भयो. परम्परागत sangria Tempranillo अंगूर बाट बनेको थियो, रियोजा क्षेत्र मा हुर्केको, स्पेन. तथापि, तपाइँ स्पेन र पोर्चुगल मा जताततै यो स्वादिष्ट मादक पेय को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ.
बार्सिलोना मा सबै भन्दा राम्रो Sangria संग केहि सिफारिश स्थानहरु: कावा र Arcano मा रातो Sangria, टिकट मा Sangria संग तरबूज.
4. जिन इंग्ल्याण्ड
जिन पहिलो पटक १ Britain औं शताब्दीमा हल्याण्डबाट बेलायत आइपुग्यो. कारण हो कि जिन जंगली जामुन बाट बनेको छ, यस प्रकार जिन सोडा संग मिश्रित एक जामुन आधारित पेय हो, पानी, र कहिले मिठाई. जिन पहिलो पेय हो कि महिलाहरु र पुरुषहरु लाई इ England्गल्याण्ड भर पब मा एक साथ ल्याईयो. कारण रक्सी को उच्च स्तर हो, सबै अवरोध गायब बनाउन.
आज, जिन विभिन्न सामाग्री संग मिश्रित छ: पुदीना, ग्रील्ड नींबू स्लाइस, peppercorns, र रसदार रातो सुन्तला. चूंकि जिन अत्यधिक अल्कोहल हो, तपाइँ प्रकाश को गति भन्दा छिटो पियको पाउनुहुनेछ. यसरी, यो सधैं एक समूह मा सलाखों मा उपस्थित हुन को लागी सल्लाह दिइन्छ. यस तरीकाले तपाइँ एक बाट सुरक्षित हुनुहुन्छ प्रमुख यात्रा घोटाला विश्वव्यापी बच्न, भेष मा मैत्री स्थानीय जस्तै.
एम्स्टर्डम एक ट्रेन संग लन्डन
एक ट्रेन संग पेरिस लन्डन
एक ट्रेन संग बर्लिन लन्डन
एक ट्रेन संग ब्रसेल्स लन्डन
5. Becherovka चेक गणतन्त्र
चेक गणतन्त्र को प्रतिष्ठित अल्कोहल बियर हो. बियर चेकिया मा पानी भन्दा सस्तो छ, र धेरैलाई थाहा छैन कि मादक पेय को कोशिश बेचेरोभस्का हो. त्यो सहि, अत्यधिक मादक Becherovska पेय जाडो मा सबैभन्दा लोकप्रिय छ. यो पेय भन्दा बढी हुन्छ 20 जडीबुटी को प्रकार, दालचीनी स्वाद, नाशपाती वा अनानास को रस संग मिश्रित. यो बलियो औषधीय स्वाद को कारण हो, र पक्कै पनि 38% रक्सी.
बेचेरोभस्का को प्रयास गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँ बेचर को बार मा छ. यो कूल बार को नाम Josef Vitus Becher पछि राखिएको छ, जसले एक पाचन औषधि बाट रक्सी बदल्यो, कटु रक्सी मा यो आज छ, फिर्ता 1807.
न्युरेनबर्ग एक ट्रेनको साथ प्रागमा
म्यूनिख प्राग एक ट्रेन संग
बर्लिन प्राग एक ट्रेन संग
भियना प्राग एक ट्रेन संग
6. पिम्म्स कप युनाइटेड किंगडम
तपाइँको अंग्रेजी छुट्टी मा विम्बल्डन वा चेल्सी वार्षिक फूल शो मा भाग लिदै? तपाइँ सायद भन्दा धेरै पिउनुहुन्छ 1 Pimm को कप. Pimms इ England्गल्याण्ड को गर्मी को घटनाहरु मा परम गर्मी को पेय हो, मीठो, आइस्ड, र फल संग सेवा, तातो गर्मी को दिन को लागी एकदम सही.
तथापि, यो फल पेय मात्र एक राम्रो पंच हुन गल्ती नगर्नुहोस्, किनभने यो वास्तव मा समावेश गर्दछ 25% रक्सी. साथै, Pimms जिन आधारित छ जो यसको रक्सी को स्तर मा जोड्दछ, त्यसोभए तपाइँ कसरी ध्यान दिन सक्नुहुन्न 1-2 पेय मा तपाइँ tipsy भन्दा बढी पाउनुहुन्छ सबैभन्दा ठूलो ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश घटनाहरु.
7. जाडो मा विश्वव्यापी प्रयास गर्न को लागी रक्सी पेय: Gluhwein
क्रिसमस समय युरोप मा यात्रा गर्न को लागी एक उत्तम समय हो, र क्रिसमस बजार सबैभन्दा अचम्मको आकर्षण हो. Gluhwein एक आश्चर्यजनक mulled शराब हो, र तपाइँ यसलाई जर्मनी मा क्रिसमस बजार मा स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ, अस्ट्रिया, र स्विट्जरल्याण्ड, मात्र खुसी भीड पालन गर्नुहोस्.
रेड वाइनको विपरीत, Gluhwein मीठो छ, साइट्रस संग मिश्रित, मसला, र दालचीनी. साथै, तपाइँ यसलाई न्यानो किन्नुहुनेछ, त्यसोभए तपाइँ चिसो यूरोपीयन जाडोमा वरिपरि घुम्न बाट एक मीठो र आरामदायक ब्रेक प्रदान गर्नुहुनेछ. चिसो मौसम पेय को विपरीत, Schnaps स्वाद मादक पेय को लागी एक राम्रो विकल्प हो जब युरोप मा प्रयास गर्नुहोस्.
8. रक्सी पेय चीन मा प्रयास गर्न को लागी: Maotai रक्सी
राष्ट्रिय चिनियाँ Maotai रक्सी Guizhou प्रान्त मा उत्पादन गरिन्छ. माओताई पहिलो पटक १th औं शताब्दीमा मिंग राजवंश को समयमा उत्पादन भएको थियो. यो पनी कोशिश गर्नु पर्छ अल्कोहल चिनियाँ पेय अन्न मा बनेको छ एक प्रक्रिया हो कि केहि बर्ष लाग्दछ जब सम्म यो मिश्रण ताकि शराब ठीक सास फेर्न सक्छ.
त्यसैले, यदी तिमी चीन मा यात्रा, तब निश्चित रूप मा यो अद्वितीय Maotami पेय को प्रयास गर्नुहोस्. यो सबै भन्दा राम्रो छ यसको स्वाद मा 20-25 डिग्री तापमान, एक विशेष ट्यूलिप आकार गिलास मा. यो तपाइँ यो सोया सॉस स्वाद चीनी रक्सी को धनी र ध्यान aromas स्वाद गर्न अनुमति दिनेछ.
9. Grappa इटाली
तपाइँ यो स्वादिष्ट pomace स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ – अंगूर ब्रान्डी उत्तरी इटाली मा लोकप्रिय छ, स्विट्जरल्याण्ड, र सान मारिनो. जब तपाइँ लंच मा Aperol पिउनुहुन्छ, grappa एक खाना पछि पेय हो, भारी पास्ता वा पिज्जा खाना पचाउन मद्दत गर्न. त्यसैले, क्लासिक शराब विपरीत तपाइँ उच्च शराब गिलास मा पिउनुहुनेछ, grappa को सानो गिलास मा आउनेछ 1-2 औंस.
साथै, तपाइँ छोटो एस्प्रेसो संगै Grappa को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ, वा यो ककटेल मा मिश्रित स्वाद, या त बाटो, तपाइँ यो प्रसिद्ध इटालियन अल्कोहल पेय को प्रयास को आनन्द लिनुहुनेछ, र इटाली मा तपाइँको जरूरी खाना र पेय को प्रयास गर्न को लागी पिन गर्नु पर्छ.
एक ट्रेन संग रोम को लागी मिलान
एउटा ट्रेनको साथ रोममा फ्लोरेन्स
एक ट्रेन संग रोम भेनिस
रेलको साथ रोममा नेपल्स
10. जेनेभर बेल्जियम
युरोप मा सबैभन्दा पुरानो रक्सी, जेनेवर जिनको उत्पत्ति हो. तथापि, आज यी दुई पेय दुई धेरै फरक अल्कोहल पेय हो. जब बेल्जियम मा तपाइँ पुरानो र युवा जेनेवर को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ, aperitif को रूप मा युवा जनरल, जबकि पाचन को रूप मा पुरानो जनरल डिनर पछि.
जेनेभर भन्दा बेल्जियम को आत्मा हो 500 वर्ष. धेरै भन्दा राम्रो बेल्जियम बियर स्वाद को उद्देश्य संग बेल्जियम को यात्रा. तैपनि, जेनेभर बेल्जियम मा परम्परागत मादक पेय हो. यदि तपाइँ एक स्मारिका को रूप मा बेल्जियम जेनेवर ब्रिंक गर्न चाहानुहुन्छ, माटो बाट बनेको बोतल को लागी हेर्नुहोस्, प्रतिष्ठित हस्तशिल्प जगहरु यो अद्भुत रक्सी को भण्डारण.
लक्जमबर्ग देखि एक ट्रेनको साथ ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प एक ट्रेनको साथ ब्रसेल्समा
एम्स्टर्डम एक रेलको साथ ब्रसेल्स
पेरिस एक ट्रेन संग ब्रुसेल्स
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई संसारभरि आफ्नो छुट्टी योजना बनाउन मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं. सबै भन्दा राम्रो पट्टीहरु, पबहरूमा, र स्पट यी प्रयास गर्न 10 विश्वव्यापी मादक पेय एक रेल यात्रा टाढा छन्.
के तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट "१० अल्कोहल पेय विश्वव्यापी प्रयास गर्न को लागी" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, र तपाईं / ru लाई / fr वा / es र अधिक भाषाहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ.
#पेय रक्सी अल्कोहल ड्रिंक्स अल्कोहल पेय विश्वव्यापी लोकप्रिय अल्कोहल ड्रिंक्स
10 ग्रेट बास्केटबल कोर्ट संग सर्वश्रेष्ठ छुट्टी स्थानहरु
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
कसरी ट्रेन भाडा मा मुद्रा बचत गर्न
रेल वित्त, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा सल्लाह
शीर्ष3राम्रो खाना सेवा युरोपेली रेल
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
12 संसारमा सर्वश्रेष्ठ एस्केप कोठा
12 युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु
10 टेनिस क्षेत्रहरु संग शीर्ष गन्तव्यहरु